ကမ္ဘာ့လုံခြုံရေးအတင်းကျပ်ဆုံးသော လျိုဝှက် နေရာ (၆)ခု - ONE DAILY MEDIA
ကမ္ဘာ့လုံခြုံရေးအတင်းကျပ်ဆုံးသော လျိုဝှက် နေရာ (၆)ခု
ကမ္ဘာပေါ်မှာ သာမန်လူများအတွက် တကယ့်ကို ဝင်ထွက်ရခက်ခဲတဲ့ နေရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ် ။ စည်းကမ်းတင်းကျပ်ပြီး အလွန်စိတ်၀င်စားစရာ ကောင်းသောနေရာများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သာမန်အားဖြင့် ဝင်ထွက်ခွင့်မရနိုင်တဲ့ ကမ္ဘာပေါ်အရပ်ရပ်က စည်းကမ်းတင်းကျပ် လျိုဝှက်နေရာ (၆)ခု ၏ စိတ်စားဖွယ်များကို ဖော်ပြပေးလိုပါတယ် ။
1. Global Seed Vault, Svalbard, Norway
Svalbard Global Seed Vault ကို Spitzbergen ကျွန်းတွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးစေ့နမူနာ သန်း ၂၅၀ ကိုသိုလှောင်ထားပြီး လူတို့အတွက် မည်သည့်အပင်ကိုမဆို ပြန်လည်ရယူနိုင်ရန် ဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းနေရာဟာ ပင်လယ်ရေ မျက်နှာပြင်အထက်မှာ တည်ရှိပြီး မြေငလျင်လှုပ်ခြင်းမရှိသောကြောင့် မျိုးစေ့များသိုလှောင်ရန် အမှန်တကယ် ပြီးပြည့်စုံသောနေရာတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
2. HavenCo, Sealand
အဆိုပါ အချက်အလက်စင်တာကို Sealand တွင် ၂၀၀၀ ခုနှစ်က ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်း၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ Havenco က ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်ပိတ်ခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၃ တွင် တစ်ဖန် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။
3. “Pionen” Bunker, Stockholm, Sweden
Bahnhof ၏ဒေတာစင်တာများဟာ မြေအောက်ပေ ၁၀၀ ရှိဂူတစ်ခုမှာ တည်ရှိပါတယ်။ ဒီ နေရာကို ၁၉၄၃ ခုနှစ်တွင် ဗုံးခိုကျင်းအဖြစ်တည်ဆောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ဂူအတွင်းမှ အပင်အစစ်များ၊ ရေတံခွန်တုများနှင့်ကြီးမားသောငါးပြတိုက်တို့ဟာ ၀န်ထမ်းများအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ခံစားမှုများ ဖြစ်စေမှာပါ။
4. RAF Menwith Hill Base, Yorkshire, Great Britain
ဒီနေရာကို စစ်အေးကာလ အချက်ပြမှုများ ဖမ်းယူရန်အတွက် ၁၉၅၄ မှာတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအခါ မည်သို့အသုံးချနေသည်ကို အတိအကျ မသိနိုင်သော်လည်း ၎င်းဟာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ထောက်လှမ်းရေးအချက်အလက် သိုလှောင်သည့်နေရာကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင်အလျှို့ဝှက်ဆုံးစာကြည့်တိုက်အဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါတယ် ။ အဆိုပါစာကြည့်တိုက်အတွင်း ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး၏ စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးကို (၇) ရာစုကတည်းက သိုလှောင်ထားသည်ဟာ သိရပါတယ် ။ သုတေသနအရာရှိတစ်ဦး သာလျှင်အထူးခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မော်ကွန်းတိုက်ထဲသို့ ၀င်ရောက်နိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
6. Bold Lane Car Park, Derbyshire, Great Britain
ဒီကားပါကင်ဟာတော့ ကမ္ဘာ့အလုံခြုံဆုံးနေရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ယာဉ်မောင်းများဟာ ကားရပ်နားရန်နေရာနှင့်အတူ အထူးပြုလုပ်ထားသော ဘားကုဒ် လက်မှတ်များကိုရရှိကြပါတယ်။ ကားတစ်စီးချင်းစီ၏ အောက်တွင်လည်း တစ်စုံတစ်ယောက်က ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲကားကိုရွှေ့လျှင် အချက်ပေးမည့် အာရုံခံကိရိယာများ ပါဝင်ပြီး စောင့်ကြည့်ကင်မရာ အလုံး ၁၉၀ ရှိပါတယ်။